HMA VPN Proxy & WiFi လုံခြုံရေး၊ အွန်လိုင်းလုံခြုံရေး APK ကို Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်သည်
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » HMA VPN ကို Proxy & Wi-Fi လုံခြုံရေး, အွန်လိုင်းသီးသန့်လုံခြုံရေး
HMA VPN ကို Proxy & Wi-Fi လုံခြုံရေး, အွန်လိုင်းသီးသန့်လုံခြုံရေး APK ကို
HMA, သင့်အကြိုက်ဆုံးက်ဘ်ဆိုက်များအားပြန်ဖွင့အွန်လိုင်း browsing နေစဉ်အမည်မသိတည်းခိုနှင့်ဟက်ကာများနှင့်သူခိုးမှသင်၏အချက်အလက်တွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံး Android မှာ VPN ကို App ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကသို့မဟုတ်အများပြည်သူကွန်ယက်ချိတ်ဆက်အခါ HMA app ကိုသုံးပါနှင့်ကမ္ဘာအတွက်အကြီးမားဆုံး VPN ကိုကွန်ယက်ချက်ချင်း access ကိုပျော်မွေ့!
အဆင်သင့် get - ကျွန်ုပ်တို့၏ VPN ကိုအွန်လိုင်းသင်သည်စုစုပေါင်း privacy ကိုပေးခြင်း, သင့်ဒေတာတွေကိုစာဝှက်
Set တည်နေရာ - ပြည်ပမှာအနေဖြင့်သင်အကြိုက်ဆုံးက်ဘ်ဆိုက်များကိုရယူလိုပါသလား? သင့် IP လိပ်စာတည်နေရာ 190 + နိုင်ငံများစာရင်းတစ်ခုကနေ server ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် Hide
သွား - အမည်ဝှက် Surf!
ရန် HMA VPN ကို proxy ကိုသုံးပါ:
√ ကာကွယ်ပါနှင့် secure သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုအများပြည်သူသုံး Wi-Fi ကိုချိတ်ဆက်သောအခါ
√ သင့် IP လိပ်စာဖျောက်ထားပါ အမည်မသိ browsing အတွက်ခံစားရန်
√ ဟက်ကာများကိုရပ်တန့် သင့်အွန်လိုင်း privacy ကိုကျူးကျော်ခြင်းမှသင့်ရဲ့အထောက်အထားနှင့်အချက်အလက် snoopers ခိုးယူခြင်းမှ
အဘယ်ကြောင့် HMA VPN ကိုရှေးခယျြ?
* ကျနော်တို့တခြားသူတွေထက်ပိုပြီးနိုင်ငံများရှိ VPN ကို proxy ဆာဗာများ
* ကျွန်ုပ်တို့၏ VPN ကိုသင့်ရဲ့စမတ်တီဗီသို့မဟုတ်ဂိမ်း console ကိုအပါအဝင်, သင့်ထုတ်ကုန်အားလုံးအပေါ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သင်ပင်တစ်ချိန်တည်းမှာ devices များ5အထိချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်!
အီးမေးလ်နှင့်တိုက်ရိုက်ချက်တင်ကနေတဆင့် * က Round-The-နာရီဖောက်သည်ထောက်ခံမှု
မလုံခြုံအများပြည်သူသုံး Wi-Fi ကိုဟော့စပေါ့တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ * သင့်ရဲ့ connection ကို Encrypt
* ကျွန်ုပ်တို့၏ "အကြိုက်ဆုံးဆာဗာ" အင်္ဂါရပ်သင်သည်မည်သည့် VPN ဆာဗာသို့မဟုတ်နိုင်ငံကယ်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်
VPN ကိုကဘာလဲ? အများပြည်သူအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုအတွင်းတွင်ပုဂ္ဂလိကကွန်ယက်ကိုဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်အွန်လိုင်း browsing နေစဉ်တစ်ဦးက Virtual Private Network ကိုသင်လုံခြုံစောင့်ရှောက်။ အဲဒီအစားသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် IP လိပ်စာကိုဖေါ်ပြခြင်း၏, သင့်ရဲ့ Android device ကိုတစ်ဦး proxy server ကို အသုံးပြု. ငါတို့ဥစ်စာထဲကတစ်ခုပြသထားတယ်။ ရလဒ်? သင်တို့သည်ငါတို့၏ VPN ဆာဗာတည်ရှိရာနေရာတွင်မနေပုဂ္ဂလိကနှင့်လုံခြုံတဲ့ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းကိုပျော်မွေ့! Plus အား, သင်၏ဆက်သွယ်မှုကိုသင်မေးခွန်းထုတ်စရာအများပြည်သူသုံး Wi-Fi ကိုဟော့စပေါ့နဲ့ချိတ်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်, encrypted နေကြသည်။
အဘယ်ကြောင့်သင်က VPN ကိုလိုအပ်သလဲ? သင်တစ်ဦးလုံခြုံအများပြည်သူသုံး Wi-Fi ကိုဟော့စပေါ့မှသင့်ရဲ့ device ကိုချိတ်ဆက်အချိန်မရွေး, သင်အန္တရာယ်မှာသင့်ရဲ့လုံခြုံရေးနှင့် privacy ကိုချပြီးနေကြသည်။ အင်တာနက်ကို surfing သည့်အခါ HMA သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာဒေတာအတွက်အစိုးရ-Level ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကမ်းလှမ်း - သင်သွားလေရာရာ၌။
ယခု HMA ရယူပါ:
√ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကို Wi-Fi ကိုဟော့စပေါ့ကာကွယ်မှု
√အမည်မသိ browsing အတွက်
√သင့် IP လိပ်စာဖျောက်ထားခြင်း
* ဒီ app (24 / 7) မှတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုကိုဆက်သွယ်ပါ
* နေရာလေးကို In-app ကိုအကူအညီတောင်း features တွေ
အီးမေးလ်နှင့်တိုက်ရိုက်ချက်တင်ကနေတဆင့် * ကျွမ်းကျင်သူဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအသင်း
HMA Privax လီမိတက်အလယ်ပိုင်းလန်ဒန်အခြေစိုက်ဗြိတိန်ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။
Android အတွက်အဆိုပါ HMA VPN ကိုနဲ့ Proxy ဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းဖောက်သည်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာအားဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း VPN service တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ join နှင့် privacy ရန်သင့်ညာဘက်ပြန်ဖြစ် - အမည်မသိ browsing အတွက်ပျော်မွေ့နှင့်သင့်အထိခိုက်မခံ data တွေကိုခိုးယူခြင်းမှသူခိုးကိုတားဆီး။
တဦးတည်း subscription ကိုအလုံးစုံတို့အဘို့ချေ:
အခြားအ VPN ကိုန်ဆောင်မှုများနှင့်မတူဘဲငါတို့သင့်ကိရိယာများအားလုံးပေါ်တွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့စမတ်တီဗီ, ကွန်ပျူတာ, သို့မဟုတ်ဂိမ်းကစားခြင်း console ကိုပါဝင်သည်။ သင်ပင်တစ်ချိန်တည်းမှာ devices များ5အထိချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
* 1 လ
*6လအတွင်း
* 12 လအတွင်း (က7ရက်ကြာအခမဲ့စမ်းသပ်ပြီးနောက်)
- ငွေပေးချေမှုရမည့်ဝယ်ယူ၏အတည်ပြုချက်ကိုအပြီးသင်၏ Google / PayPal ကအကောင့်တရားစွဲဆိုလိမ့်မည်
- Auto-သက်တမ်းတိုးဖို့မှာအနည်းဆုံး 24 နာရီလက်ရှိစာရင်းသွင်းခြင်းကာလမကုန်မီပိတ်ထားမဟုတ်လျှင်သင့်စာရင်းပေးသွင်းထားကိုအလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးမည်
- သင်ကတူညီတဲ့ကြာချိန်နှင့်လက်ရှိကြေးပေးသွင်းမှုနှုန်းမှာကြိုတင်လက်ရှိကာလ၏အဆုံးမှ 24 နာရီအတွင်းသက်တမ်းတိုးဘို့တရားစွဲဆိုလိမ့်မည်
- သင့် subscriptions ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဝယ်ယူပြီးနောက်သင့်ရဲ့ Account Settings ကိုသွားအားဖြင့် Auto-သက်တမ်းတိုးကို turn off နိုင်ပါတယ်
- လက်ရှိ subscription ကိုမဖျက်သိမ်းခြင်းတက်ကြွစွာကြေးပေးသွင်းကာလအတွင်းခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
HMA 4.18 ကြိုဆိုပါတယ် ကျေးဇူးပြု. ! သင့်ရဲ့ privacy ကိုအတူရွေးချယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ app များကိုသင် VPN ကိုဖွင့်သည့်အခါ tunneled နှင့်အရာကြွင်းလေအင်တာနက်ပုံမှန် access ကိုစောင့်ရှောက်ပါစေရလိမ့်မည်သည့်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ကြှနျုပျတို့ကိုသင်ထင်သောအရာကိုသိစေရန်ပြန်လည်သုံးသပ်ချန်ထားပါ။ သင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုအရန်အလွန်အရေးကြီးသောပါ!
HMA VPN ကို Proxy & Wi-Fi လုံခြုံရေး, အွန်လိုင်းသီးသန့်လုံခြုံရေး
18.71 ကို MB
VPN ကို: အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂလိက ...